News & Ihe Factory | China News & Ihe Manufacturers, Suppliers
Ime ụdị ngwa ahia ụlọ ọrụ na ngwa nbipute 3D
Onye ntinye 3D iji mepụta ụdị ngwaahịa ụlọ ọrụ Ejiri tụnyere usoro ịkpụzi ọdịnala nke ngwaahịa ụlọ ọrụ, site n'enyemaka nke teknụzụ obibi akwụkwọ 3D na akụrụngwa, ndị na-emepụta nwere ike iji sọftụwia kọmputa, wdg wee see njirimara nke ngwaahịa ma bipụta ọdịdị atọ ya. . ...
Kedu otu esi erite uru site na ndị na-ebi akwụkwọ 3D? N'oge ugbu a ọtụtụ mmadụ na-anabata usoro 3
N’oge na-adịbeghị anya, site n’ihu na-aga n’ihu na ntozu oke nke teknụzụ mbipụta 3D, ntinye ya na ngalaba dị iche iche ka na-amakwu, Olile anya mmepe nke mbipụta 3D n’ọrụ dị iche iche na-enwe nchekwube maka ọtụtụ mmadụ. Karịsịa na ụlọ ọrụ mmepụta ihe, mor ...
Ntinye ndị na-ebi akwụkwọ SLA 3D
Shanghai Digital Manufacturing Co., Ltd bụ onye ama ama ama ama emepụtara nke ndị na-ebi akwụkwọ 3D nọ na Shanghai, China. Nnukwu ụlọ ọrụ SLA 3D na-ebi akwụkwọ bụ nhọrọ pụrụ iche maka ụdị ngwa ngwa, ngwa ọrụ ngwa ngwa, akpụ akpụ akpụkpọ ụkwụ, akpa ezé, ngwaahịa ụgbọala na ụdị ụgbọ ala niile, arụ ...
Kedu ihe ndị na - ere SLA 3D na - ere ahịa kacha mma?
A na-ekwupụta ndị na-ebi akwụkwọ 3D dị ka “teknụzụ kacha ere ahịa na-apụta mma.” Site na mmepe ngwa ngwa ụlọ ọrụ 3D na-ebi ngwa ngwa, ụlọ ọrụ obibi akwụkwọ 3D na ndị mba ọzọ jigidere mmụọ mmụọ ọhụrụ, ma na-ebipụta ngwa ngwa ụlọ obibi akwụkwọ ọhụrụ 3D ọhụrụ dị iche iche. Na…
Robot 3D Izipụta nri
site na nhazi na 20-04-16
Igwe onyonyo 3D na-ebuputa ihe nri na teknụzụ ya na teknụzụ mbipụta 3D ya dị elu na Shanghai Yingjisi, ụlọ ọrụ robot R & D maara nke ọma na Shanghai, SHDM mepụtara igwe mmadụ na-asọmpi ike dị ka ntinye nri nri na China. Njikọ zuru oke nke ndị na-ebi akwụkwọ 3D na intelli ...
Mpempe akwụkwọ iwu 3D e biri ebi
Site na mgbasa ozi 3D na-aga n'ihu, ọtụtụ ndị mmadụ ebidola iji teknụzụ obibi 3D iji mee ụdị dị iche iche na aka ọrụ. Ekelewo uzo oma ihe kwesiri ekwesi nke oma. Ihe ngosi echichi nke 3D n’egosiputa ihe omuma banyere ihe nlere, sa ...
Etu esi ahazie ihe omume puru iche?
site na nhazi na 20-03-04
Bịa mụta teknụzụ 3D dịkwuo elu, site na nhazi nke ndụ ndị mmadụ, njirimara nkeonwe na nke dịgasị iche iche abụrụla ihe kachasị, teknụzụ nhazi ọdịnala ezutewo nsogbu ndị a na-enwetụbeghị ụdị. Etu ị ga-esi mezie nhazi ịhazi onwe gị na ọnụ ala dị ala, tozuru oke ...
Ntinye nke ngwa nbipute 3D na ọgwụ a kapịrị ọnụ
site na nhazi na 20-02-23
Ka ọ dị ugbu a, ntiwapụ nke COVID-19 na-emetụta obi onye ọ bụla, ndị ọkachamara n'ịgwọ ahụike na ndị nchọpụta n'ụlọ na mba ofesi na-agbasi mbọ ike na nchọpụta nje na mmepe ọgwụ mgbochi. N'ime ụlọ obibi akwụkwọ 3D, "ihe nlereanya 3D mbụ nke ọrịa ọnya coronavirus ọhụrụ na China ha ...
Proto na-eme usoro mmepụta ihe eji arụ ọrụ na ...
Kedu otu esi erite uru site na ndị na-ebi akwụkwọ 3D? Oge ugbu a…
Kedu ihe kpatara ịhọrọ SLA 3D onye na-ebi akwụkwọ? Kedu ihe ndị a ...